myo_paing, Author at YTV Channel
Author Archives: myo_paing
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချပြီး အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ့် ခံစစ်မှူး ရူဒီဂါ…..
ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ သောမတ်စ်တူချယ် က နောက်ခံလူ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ဟာ စတန်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ ဝက်စ်ဟမ်းကိုအနိုင်ရပွဲအပြီးမှာ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်.....
ချယ်ဆီးအသင်းဖက်က စာချုပ်သစ်အတွက် တပတ်လုပ်ခ ပေါင် ၂ သိန်းကျော်အထိတိုးမြှင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ရူဒီဂါ က ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချပြီး ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအကုန်မှာ အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးနဲ့ အသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.....
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် လစာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူ ဖြစ်လာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်.....
ဂျာမနီလက်ရွေးစင် ခံစစ်မှူး အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ဟာ စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုကို ငွေကြေးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းနဲ့သာ ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခင်အသင်းပိုင်ရှင် ရုရှားရေနံဘီလျံနာ ရိုမန်အေဘရာမိုဗစ်ချ် အပေါ် ဗြိတိန်အစိုးရမှ စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမလုပ်ခင်ကတည်းက ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ လစာတိုးမြှင့်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကို တောက်လျှောက်ငြင်းပယ်လာခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်.....
ရူဒီဂါ ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရိုးမားအသင်းအနေ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ကနဦးပေါင် ၂၉ သန်းဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁၂ ဂိုးသွင်းပြီး ဂိုးဖန်တီးမှု ၇ ကြိမ် စွမ်းဆောင်ထားကာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ FA Cup, Super Cup, Europa League, Champions League ဖလားများကို အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်.....
လက်ရှိမှာတော့ ရူဒီဂါ ဟာ သူလိုချင်တဲ့လစာပမာဏ ဘာစီလိုနာကိုကျော်ပြီး ကမ်းလှမ်းပေးနိုင်မယ့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ခန့်မှန်းရပေမယ့် ရူဒီဂါရဲ့အေးဂျင့်ကတော့ ဒီစပိန်အင်အားကြီးကလပ် ၂ သင်းအပြင် ပီအက်စ်ဂျီ၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုင်တက် တို့ထံမှလည်း ကမ်းလှမ်းတွေကို လက်ခံဆွေးနွေးထားတယ်လို့ ထပ်မံသိရှိရပါတယ်.....
အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးနဲ့ ထိပ်တန်းခံစစ်မှူး အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ တစ်ယောက် လာမယ့်ရာသီမှာ ဘယ်အသင်းကိုရောက်နိုင်မလဲ...? အဖြေကတော့ ဘောလုံးဝါသနာရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့်သတင်းကောင်းတစ်ခုလာပါလိမ့်မယ်.....
လိုင်ချီးသီးက ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးများ……..
YTV ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသီးလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး အခုတခါမှာတော့ လိုင်ချီးသီးရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်....
ဒီအသီးလေးက ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အကျိူုးကျေးဇူးပေးစွမ်းနိုင်လဲ.... ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး အမြင်လေးတွေကိုလည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်.....
မင်းကွတ်သီးနဲ့ လူသားတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး……
YTV Channel ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်လေးကနေ ပြန်လည် ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်.....
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ မင်းကွတ်သီးတစ်လုံးအနေနဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးပြုတယ် အကျိုးကျေးဇူး ရရှိနိုင်သလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရင်း မှတ်ချက်လေးတွေ ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်.....
ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများစွာရှိတဲ့ ဆီးသီး….
YTV Channel ကို အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်လေးကနေ အခုတခါမှာတော့ ဆီးသီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်.....
ဆီးသီးကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ရရှိနိုင်သလဲ...??? ဘယ်လိုကောင်းကျိုးပြုသလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်....
ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးထူးတဲ့ စပျစ်သီး…..
YTV ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်လေးကနေ အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ကျန်းမာရေးကို အကျိုးထူးခြားစွာ ပေးနေတဲ့ စပျစ်သီးရဲ့ အကြောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်....
ဒီစပျစ်သီးတွေအနေနဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ဘယ်လောက်အထိ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးပေးသလဲ...??? ဘယ်လိုကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ပရိသတ်ကြီးတို့ ကိုယ်တိုင် အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး အမြင်လေးတွေကိုလည်း ပြောပြပေးခဲ့ပါဦးနော်......